26ka Juun Waa Hooyadii Qarannimad Soomaliland: Dhamaashadka manta waa mid macno cusub ku soo kordhiyey maamuuskeeda. By, Ahmed Arwo | Araweelo News Network (Archive) -
Waxaynu ognay in kal hore ahayd maalintii doorashada Madaxtooyada. Maalintaas oo muujisay in Somaliland dadkeedu yahay duul u bisil dimuquraadiyada, duul la xisaabtami kara cidda ay xilka u dhiibtaan, eryi kara oo saari kara kolba kii ay u arkaan inay danta guud ku jirto. Wey
foodeen oo nabad ayey ku codeeyeen, wey codeeyeen oo qabiilbay ka guureen, wey hadleen oo fadhiid iyo kursi-yurur ayey ka baqooleen, wey dhaqaaqeen oo danta guud ayey u ambabaxeen. Waxay keeneen Kulmiye oo hogaanka qabta. Waxayna noqotay 26ka June 2010 kolkii ugu horeysay ee xisbi mucaarid ihi si dimuquraadi ah uu xilka ula wareego geeska Afrika iyo in yar mooyee dalalka soo koraaya oo dhan. Waa taariikh khad dahab ah lagu qoray, qoraaguna waa dadweynah Somaliland.